China Baby Adult Diaper Marina Tsara fonosana wrapping Machine misintona-dehibe làlana ≥ 98% mpanamboatra sy ny mpamatsy | GACHN
Mamatsy lamba milina fonosana marina ny zazakely amin'ny mason-jaza voafantina ≥ 98%
Ny fanaovana ny kitapo amin'ny milina
40 Bag / min
Ny halavan'ny kitapo dia maimaim-poana amin'ny alàlan'ny famandrihana manual, ny fitaovana dia mety hahita tsara sy mametraka ny halavany.
Fitaovana mekanika namboarina, mora hitazona, mangovitra kely, akanjo kely ary "fiainana lava".
Ny foiben-tena fanaraha-maso dia maka ny PLC hamolavola ny orinasantsika manokana, fampisehoana efijery nomerika ary fehezin'ny transducer. Mifanaraka tsara eo anelanelan'ny mpandraharaha sy ny milina. Fampidirana mihetsika, mivantana sy mety.
Ny fahaiza-manao sy ny halavan'ny kitapo dia mifehy fifehezana avo roa heny amin'ny fanitarana haingam-pandeha tsy misy dingana sy fanitsiana mivelatra. Afaka mifanandrify tsara amin'ny mpamokatra taloha teo amin'ny sehatry ny famokarana.
Ny fitaovana fakan-tahaka mampihetsi-po valiny mora azo dia afaka manaraka sy mandeha tsara.
Ny fifehezana hafanana tsy miankina ho an'ny mpanisy tombo-kase dia hahatonga ny tombo-kase tsara tarehy sy henjana ary mety ho an'ny fitaovana famonosana malalaka.
Ny hafainganam-pandeha fonosana Miorina amin'ny 40bags / min,
Manomeza làlana ≥98%
fahombiazana miasa ≥92%
Fomba fonosana Rakotra horonan-tsarimihetsika, manamboatra kitapo eny an-dàlana.
Fonosana entana PE na sarimihetsika madinidinika, ny hatevin'ny tokana dia 50-100μm
Fefy fonosana L≤400mm, W = 200mm-400mm, H = 90mm -200mm
Habe telo L4.7m × W3.3m × H2.7m
DW Tokony ho 4200KG
Ny fametrahana herinaratra Tokony ho 19KW
Fampitana herinaratra Ny rafitra an-tariby efatra mizara (A, B, C, PE), 380V / 50Hz
Takian ny rivotra Ny tsindry fidirana: 0.6-0.8MPa, fanjifana rivotra ≦ 200LPM
Manova ny endrika endrika amin'ny fanovana ny haben'ny compnent, 20 minitra fotsiny dia manatsara ny fahombiazan'ny famokarana.
Amin'ny alàlan'ny fampifanarahana ny hetsika Mitsubishi sy Yaskawa mifehy ny PLC sy ny rafi-pitaterana lineo servo générale dia miantoka fonosana sy fahamarinan-toerana tena marina izy.
Ny fandalinana ny tsy fahombiazan'ny saina
Rehefa tapaka ilay milina ary misy ny fanamboarana tampoka materail dia nanome torolàlana fampitandremana tsy nahomby.
Ny vavahadin'ny kabinetra elektrika dia manokatra misokatra mihodinkodina, milamina ary tsara ny fihazonana ny fantsom-pifandraisana, ny kabinetra mifehy ny herinaratra izay manana rafi-pandriana famandrihana axial.
Previous: Zotra famokarana diaper haingam-pandeha amin'ny zazakely haingam-pandeha feno zazakely feno servo
Manaraka: Mautom-pivarotan-tena amin'ny mason-jaza fanamboarana zazakely 40 Kitapo isaky ny minitra
Fitaovana fonosana diaper amin'ny zazakely feno
Hih hafainganam-pandeha feno servo zazavavin-jaza diaper p ...
Fifadian-kanina haingam-pandeha feno Servo zazakely diaper L ...
Manjera avo lenta amin'ny mason-jaza fanamboarana zazakely ...
Teknolojia Gachn Zaza zaza sy olon-dehibe ...
Diaper olon-dehibe / Pull ups automatique diaper M ...
Fitaovana feno serba zazakely / Adero feno servo feno serivisy ...